Jabinta dhagaxa: Shaqo gacmaha dhaawaceysa laakiin nolol ugu filan dadka ku barakacay Baydhabo
Photo | Faaduma Daa'uud siddeed jir shaqo-adag oo dhagax jebin ah ka heysa kaam ku yaalla Baydhabo/Muxyadiin Xusni/Ergo
(ERGO) - Fiidey Cali Xasan oo 50 jir ah waxaa ag-fadhida gabadheeda oo siddeed jir ah oo ka nasineysa mar kasta oo ay gacmaha ku daalaan jabinta dhagaxa loo adeegsado dhismeyaasha. Dhaqaalaha ay shaqadan ka hesho ayay labadii bil ee u dambeysay ku maareysaa nolosha qoyskeeda oo ka kooban iyada iyo lix carruur ah oo ay dashay. Hooyadan oo ka mid ah dadka ku xoolo-beelay abaarta gobolka Bay ayaa saddex bil ka hor ku biirtay xerada 11-ka Janaayo ee Baydhabo.
“Waa shaqo dhib badan oo dhaawacyo u geysaneysa gacmaha. Waxay u baahan tahay xoog badan iyo adkeysi,” ayay tiri Fiidey oo mid mid dhagaxyada ugu dhiibeysa gabadheeda oo lagu magacaabo Faadumo Daa’uud Ibraahim si ay u burburiso. Waxay fadhiyaan barxadda xerada oo ilaa 30 qof oo kale ay ku mashquulsan yihiin shaqadan. Qof kasta gacanna wuxuu ku haystaa burus ama bir yar oo culus oo uu ku burburiyo dhagaxa oo uu gacanta kale ku hayo.
Gaari iska-roge ah oo 12-kii May jaay ka iibsaday xerada waxaa Fiidey ka soo gashay lacag dhan 85,000 oo shilin Soomaali ah ($3.6), kaddib markii laga gatay dhagixii u diyaarsanaa. Isu-geyn wuxuu gaarigu gatay dhagax ku kacaya 600,000 oo shilin oo dad kala duwan laga soo ururiyay. Gawaaridu in ay halkan wax ka iibsadaan ma aha fursad joogto ah, laakiin dadka xaafadaha ka imaanaya ee dambiilaha dhagaxa ku qaata ayaa ka badan. Halkii dambiil waa 3,000 oo shilin.
Ganacsiga jaayga waa mid uu dhaqdhaqaaqiisu badan yahay xilligan oo uu roob da’ayo, dadku waxay ku moosaan meelaha biyo-degeenka ah, qaarka deggan guryaha dhulka hooseeya ee biyo-hoobadka ah waxay isaga celiyaan daadka. Dadka dhisanaya guryaha shubka ah ee dhagaxa ka sameysanna way iibsadaan.
Photo | Fiidey oo dul-fadhida dhagaxyada ay jabisay gabadheeda Faadumo/Muxyadiin Xusni/Ergo
Bishii ugu horreysay Fiidey oo aan magaalada ku lahayn qaraabo caawisa ayaa carruurteeda agoonta ah ku quudin jirtay raashin bisil oo ay ka soo barido dadka ay isla soo barakaceen ee gargaarka ka hela eheladooda iyo kuwa shaqooyinka yaryar ka soo qabta magaalada. Markii ay aragtay dadka qaar oo laga iibsanayo dhagaxa ay jebiyaan ayay ku dhiirraday inay ku dayato si ay nolosheeda ugu filnaato. Hadda walwal la’aan waxay carruurteeda u heshaa wax ay cunaan saddexda waqti.
Dadka aan haysan gaari-dameerrada waxay dushooda ku soo xamaalaan cadadka dhagaxa ah oo ay ka keenaan meel duleedka magaalada ah oo ay u socdaan 30 daqiiqo. Fiidey waxay kaalmo waydiisataa dhallinyarada xerada deggan si ay ula soo xamaalaan dhagaxa, maaddaama ay sheegtay in aysan keligeed ku filneyn. Gabadheeda oo ay ka waaweyn yihiin wiil iyo gabar kale sida walaalaheed weligeed fursad uma helin inay waxbarato.
Fiidey waxay abaarta ku khasabtay inay ka soo barkacdo tuulada Barbaare oo hoostagta Qansaxdheere ka dishay 18 neef oo isugu jira lo’ iyo ari.
Maxamed Dhoorre Cali oo ka mid ah dadka soo barakacay ee noloshooda ay ku tiirsan tahay jayga ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in shaqadan ay halis badan tahay, maaddaama ay dadka ka dhaawaceyso gacmaha. Waqti badan ayay qaadataa in xitaa hal sakeel oo jaay ah la diyaariyo, haddana sidani waa habka keliya ee ay noloshooda ugu filnaan karaan iyaga oo xeradooda jooga sida uu xusay.
Wuxuu xusay in qof kasta uu isaga jajabsado jaygiisa, laakiin haddii uu gaari yimaado oo dhagax badan loo baahdo la isu geeyo qof kasta wixii uu heli karo, kaddibna lacagta la qeybsado.
Maxamed oo qoyskiisu uu ka kooban yahay siddeed qof wuxuu ka soo barakacay deegaanka Iidaale 60 km u jira Baydhabo, kaddib markii ay sanad ka hor harraadka iyo gaajada ka dhashay abaarta uga dhinteen 23 neef lo’ iyo ari isugu jira.